Maddooyo, maddooyo, mid dooro!.*
Ma jecli, hawsha suugaanta oo, rag takhasus u leh ay faraha kula jiraan in aan dhinac ka fagto. Ha yeeshee, markii dani kaa gasho in lala taataabto ma ah tacaddi saas u ballaaran. Sidaa daraadeed, maanta waxaan orod ku maryaa Sugaanta carruurtu oo laba qayb iigu muuqatay. Qayb dadka waawayn (waalidku) tiriyo, sida: [hooyo ha waayin wardheere aabbe, hooyo ha waayin wax siiso hooyo] iyo qayb carruurtu si gaar ah, u curiyeen oo cayaarahooda ay ku saleeyeen, sida: [maddooyo, maddooyo, mid dooro], isla markaana ah, qaab doorasho oo diimoqraadi ah caddaaladna ku dhisan!. Waa xeer da’yartu ku kala baxdo kolkii shay mid ah lexejeclo ka wada gasho. Kanna jeclaysto, keerra jeclaysto!.
Shayga ruux waliba naftiisa la jeclaaday, ayaa midkood loo dhiibi, isna dhabarka inta mariyo oo labada gacmood mid ku rido, ayuu dabadeed horay soo mariyo, saaxiibki oo arkayana labadii gacmood isku dul wareejiyaa isaga oo leh;“maddooyo, maddooyo mid dooro?!. Dabadeed saaxiibki labadii gacmood oo siman oo hortiisa yaal ayuu mid ku nasiibsadaa. Markuu mid taabsado, judhu-dhu kama dambayso, nac-nacna waa soo afjarantaa!.
Tusaalahaa, darsiga ku jira, waa mid caqli celin ugu filan kala dooransiinna u ah raga “Shaydaan Marooluhu” duufsaday oo ku hadaaqaya; ciidamaa si heer sare ah loo soo tababaray, ayaa yimi. Si dagan oo, lab-la-kac aan lahayn kolkaan warkrarkaa u darisay, waxaan rumaystay; “ciidamada xabashidu in ay ku sugan yihiin fargashada, naf-ka-bixidda ka horraysa”. Adigoon jirkooda taaban, waxaad meel fog ka dareemaysaa, in ay kala qaboobeen. Qaarka dambana naftii ka baxday, waxa ku harsanna yihiin; hinraagii iyo neefgurkii geerida ka horreeyay. Generaal Gabre; waxaa u muuqatay, sida, hadda arrimuhu u socdaan haddii uu ku indho adaygo, horena u tashan waaya, kol dhaw in uu qudhiisu “Jiingadda sare u eegi doono” Xabashi, caqli yarideeda waxaa galay damac ah; “bal, bakhtiga guriyihii gaarsiiya”.
Waa riwaayado la isu dhigayee, daba-dhilif yadii, waxay bilaabeen in ay ku tookhaan (faanaan): “waxaa soo qulqulaya ciidamo 4kun ah oo tababar heer sare soo qaatay”. 50kun ayaa baxsad ah, guulla ka quustay, ee 4ku maxay sheegi?!. Wallee; ciidan “Margiyo Xun ah” ayaan “Males Zanawi” oof ka soo celin!. Bal, talo xumadooda maxay isu kallifayaan (dhibayaan), wa arkaan kii soo tababaray in uu taaganyahay; “Halkee ka baxaa?!”. Rag Taangiyo wata, hadday wax tari waayeen; ma “Margiyo Xun” qabiil lagu soo xulay ayaa Muqaawamo cartamaysa oo ay isu dhinac taal; “xorriyad in ay ku noolaadaan ama shahiidaan”, u babac-dhigi karta?, sheeko!.
Waa Alle mahadiye, waxaa soo dhaw; Abeed, Abeed, Abeed iyo waqtiqii la xabasho qandhicillay laga daba qaadi lahaa; Erya, Erya, Erya. Xabashi, waa naqaan waxa ay ciidamo ku sheegtay: waa koox jaabo-jaabo ah oo ay ugu talagashay, ciidamadeedu markay baqanayaan, in aan la daba-goosan. Care, yaa igula sharatama; in habayn galinkiisa dambe ay dhuuman doonto, subixiina lagu waabariisan doono; goobihii ay daganayd oo haawanaya “insha’Allaah”?”. Dhowr jeeroo horana waa dhacday; in habayn bar ay guureysay .
Bacdamaa, sidaa ay ku bixi doonto (HEI), laba qolo oo hadda Xabashida la shaqaysata, bal, aan la taliyo:
Kow: Ragga beenta lagu soo akhriyay; ee lagu yiri: “tababar ciidan ayaad qaadateen, ordoo dagaal taga”, waxaan oranayaa: “xabashi yaysan idiin dhiibin “dhago libaax oo ay hayn kari wayday”. Qoryaha la idiinku soo raray inta ay qiimaha lee yihiin ka faasaxa suuqa “Cir Toogte”, oo waxaa ka heshaanna; nooli iyo sahay ka dhigta.. Kollay markii la idin dul yimaado ayaad daadin doontaane”.
Labo: Qabqablayasha, waxaan xusuusinayaa “Ruuxa mu’minka ah in aan gud laba jeer laga qaniin”. Shalay “Maxkamadihii Islaamiga” ahaa, kolkay hubkaad wadateen idinka fara maroojiyeen, waa taad ku waalateen; “waa towbad keennay”. Dabadeed, adinka oon, madaxiinna la qallajin, aayar meeshaad doontaan waataad u dhoofteen.
Ha ka yaabin, maanta, sidii shalay la idiin dhaqi mayo, waayo fursaddu waa mar qura. Hubka, la isla dhexmarayo; “waa loo soo ceshay”, yuusan idin hodin”. Haddad mu’uminiin tihiin; wixii hore ha idiinkaga ekaato. Haddadse, qaniinyo labaad gacmaha u hoorsataan ogaada mu’min nimo waad kala hoyate!. Shalay go’aanka waxaa lahaa “Maxkamadihii Islaamiga” ahaa oo kaliya, runtii, six ad dhaaf ay ayay idiinku naxariisteen, idinna wanaajiyeen. Maantase, talada iyo go’aanka waxaa la wadaaga kooxo fara badan oo bulshada soomaaliyeed ka kala yimid, gudaha iyo dibaddana matala, qabiil iyo 4.5 aan shaqo ku lahayn, qadarinna agtooda kuma laha. Waa rag awalba, “ula booc ah idiin kugu tukubayay”, oo dhirifsan. Waa koox; diinta, dadka iyo dadlka; qaddarintooda wax walba ka hormariya, “Margiyo-xun” qosol-ku-jabka ahnna aan ciidan u aqoon”.
Rag qalbi leh oo talo qaadanaya haddaad tihii, maba tihiiine; “towbaddii iyo cafiskii warkiinu ha ku ekaado”. Ma diiddeen?. Waxaad ka dheeftaan cidnna wax ha ka siinina”.
Ugu dambay, diimoqraadiyadda iyo caddaaladda caruurta aniga oo idiin cuskanaya, markan; “Moddooyo, moddooyo, mid dooro”. Ogaada; waxa la idin dooran siinayo waa aayihiinna “masiirkiinni” iyo qooetiinna. Badbaado waxay idiin kugu jirtaa; dhabbaha saxa ah; gacanta haysa in aad doorataan. Waxaa la idiin ballan qaadayaa; “niyo fiican iyo hufnaan haddii la idinka dareemo, xoogaa tilmaamo ah (hints) in la idiin soo tuurtuuri doono. Naftiinna iyo soomaaliba ku badbaadiya in aad taabsataan gacanta saxa ah. Nasiib wanaagsan (god lucke).
* Maddooyo: asalkeedu waa “mid daa” oo carruurto markay ku celcelisay noqday Maddooyo,
sidaa darted asalku waa “Mid daa, midna dooro”, labada gacmood ee k u horyaal.
 “Jiingadduu sare u eegay”. Waa eraybixin dhawaan soo baxday. Maydka markii luxudka la
dhigo, Jiingad ayaa la saaraa dabadeednnaa carraa lagu rogaa.. Micnaha oo kooban waa
 2000, Ra’iisul wasaarihii “Dawladdi Carta” Jabuuti lagu soo dhisay Dr, Cali khaliif Gallaayr,
kolkii uu UN-ka ka hor caddeeyay in ciidamo xabashi ah Gobolka Gedo ku jiraan, UN-kuna
baaritaan hoos uu sameeyay ku xaqiiqsadeen warkaa. Habayn madow ayay xabashi Balad
xaawo iyo meelihii kale oo Gobolka Gado ay ka fadhiday ka baxeen. Subixii waxaa lagu
waabariistay dhufaysyadii xumaa oo ay magaala geeskeeda ka qotay oo maran. Nasib
darro, qorshe kale oo xabashido dajisay ayaa fulay, kaas oo ahaa in jilbo qabiilaka
B/xaawo daga ay afka isu galisay. Haddana la digtoonaan ogaada oo xabashi caqligaasi
kama bixin. Markay baxdo “Inshaa’ Allaah” raggii qorshaheeda beenin lahaa yaan la
 Carruurta soomaaliyee oo ah; “Raga Barri Oo Loo Hanwaynyaha” kuma maakubi (lama
simin) qabqablle-dagaal. Ha yeeshee, waxaan ka helay; caddaaladda ay ku kala baxaan
da’yartu . Show, carruurta aan yaraysanno ayaa Qabqablle-dagaal dhaama!.